Real Madrid Oo Garaacday Espanyol, Casemiro Oo Guusha Ku Hogaamiyay Iyo Los Blancos Oo Labo Dhibcood Ku Qabatay Hogaanka La Liga – Kooxda.com
HomeUncategorizedReal Madrid Oo Garaacday Espanyol, Casemiro Oo Guusha Ku Hogaamiyay Iyo Los Blancos Oo Labo Dhibcood Ku Qabatay Hogaanka La Liga
Real Madrid Oo Garaacday Espanyol, Casemiro Oo Guusha Ku Hogaamiyay Iyo Los Blancos Oo Labo Dhibcood Ku Qabatay Hogaanka La Liga
June 29, 2020 Abdiwali Adan Jamac Uncategorized, Wararka Maanta 0
Real Madrid ayaa labo dhibcood oo nadiif ah ku qabatay hogaanka horyaalka La Liga ka dib markii ay 1-0 ku dubteen kooxda Barcelona ka dhisan ee Espanyol oo marti loo ahaa.
Gool uu si qurux badan u soo dhigay Benzema islamarkaana uu dhaliyay Casemiro ayay Real Madrid ku badisay iyadoo guushaan ay ka saaciday inay labo dhibcood oo nadiif ah ka sareeyaan kooxda Barcelona oo shalay barbaro kala kulantay Celta Vigo.
Los Blancos ayaa talaabo weyn u qaaday hanashada horyaalka La Liga iyadoo xilli ciyaareedka horyaalka ay ka harsan tahay lix kulan.
Fursadii ugu horeysay ee ciyaarta waxaa heshay kooxda Espanyol. Embarba ayaa u dhawaaday inuu shabaqa kubada ku taabto ka hor inta uusan kubada helay Darder laakiin darbadiisa waxaa is hortaagay Varane.
Espanyol ayaa si fiican ciyaarta ku bilaabatay iyagoo fursadii labaad helay daqiiqadii lixaad iyadoo Embarba uu soo bilaabay kubad rogaalcelis ah laakiin Real Madrid ayaa kubada iska bixisay.
Daqiiqadii 8aad ayay Real Madrid heshay fursadeedii ugu horeysay iyadoo Casemiro uu meel 40 mitir u jirta goolka kubad ka soo qaaday isagoo ku qasbay goolhaye Diego Lopez inuu u cararo goolka oo uu badbaadiyo.
Labo daqiiqo ka dib Casemiro ayaa fursad kale abuuray laakiin Ramos ayaa wadada ka galay iyadoo daqiiqadii 14aad uu mar kale Casemiro helay kubad uu madaxa ku soo taabtay Varane laakiin bedelkii uu shabaqa cusjin lahaa waa uu qasaariyay.
Daqiiqadii 20aad Courtois ayaa badbaadin fiican sameeyay ka dib karoos uu soo dhigay Roca, halka Espanyol ay fursad kale heshay daqiiqadii 24aad laakiin waxaa ka qasaariyay Darder.
Casemiro iyo Benzema ayaa ku qasbay goolhaye Lopez inuu badbaadin kale sameeyo.
GOOOOL!!! Real Madrid ayaa heshay goolkii ay u qalantay daqiiqadii 45aad ka dib kubad uu xerada ganaaxa dhexdeeda ku koontaroolay Karim Benzema ka hor inta uusan cirib u reebin Casemiro kaasoo ku guuleystay inuu dabamariyo goolhaye Diego Lopez. Wuxuu ahaa gool si qurux badan looga soo shaqeeyay.
Benzema ayaa 117 caawin u sameeyay Real Madrid tartamada oo dhan. Waa caawintii ugu horeysay ee uu u sameeyo Casemiro.
Waxay qeybtii hore ciyaarta ku soo dhamaatay 1-0 oo ay ku hogaamineysay kooxda Real Madrid. Qeybtii labaad Espanyol ayaa ku bilaabatay si la mid ah qeybtii hore iyagoo abuuray fursad gool loo fishay laakiin Wu Lei ayaa kubada ku beegay Courtois oo badbaadiyay.
Daqiiqadii 51aad Benzema ayaa abuuray fursad lama filaan ah iyadoo kubad uu soo qaaday Isco oo u muuqatay inay banaanka u baxday uu damcay inuu xagal adag ka dhaliyo laakiin waxaa birta geeskeeda ka badbaadiyay goolhaye Lopez.
Daqiiqadii 66aad Raul de Tomas ayaa ku qasbay goolhaye Courtois inuu badbaadin fantastik ah sameeyo. Si la mid ah daqiiqadii 65aad David Lopez ayaa isku dayay inuu meel dheer ka soo toogto shabaqa Real Madrid laakiin mar kale waxaa kubada isku duubay goolhaye Courtois.
Daqiiqadii 85aad Real Madrid waxaa martay xilli wadno qabad ah ka dib karoos ay Espanyol soo dhigtay oo halis geliyay laakiin waxaa u soo baxay oo aakhirkii bixiyay goolhaye Courtous.
Inkastoo Espanyol ay raadisay goolka barbaraha ilaa daqiiqadihii ugu danbeeyay hadana ciyaarta waxay ku soo dhamaatay 1-0 oo ay Real Madrid ku badisay.
Inter Milan Oo Guul Soo Laabasho Leh Ka Gaadhay Parma
Benzema Oo Iska Guday Deyn Lagu Lahaa , Shaxdii Zidane Ee Wareerisay Hazard Maxaan Ka Baranay Guushii Real Ee Espanyol